रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिकाका पदाधिकारी छ लाख बोकेर भारत भ्रमणमा, सेवाग्राही आक्रोसित - Jhilko
रोल्पा, २९ चैत । साविकको सुवर्णावती गाउँपालिकाको नाम बदलेर सुनिल स्मृति गाउँपालिका राखियो । तत्कालीन माओवादीका तर्फबाट जितेका गाउँपालिकाका अध्यक्ष गुणेन्द्र घर्तीको प्रस्तावमा नाम बदलिएको थियो । तर, त्यसको विरोधमा केही वडा अध्यक्षले भिन्नमत लेखे ।
निकै विवादका बीच सहिद सुनिलको नाममा गाउँपालिका त बन्यो तर काम उही पुरानै ढर्राको । अझ बढी नाङ्गिएर काम भएको छ । नाममा विवाद गर्ने कतिपय वडा अध्यक्ष पनि खानपिनका मामलामा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
जनताले निर्वाचनमा मतदान गरेर जिताएका जनप्रतिनिधिहरुले नैं जनविरोधी काम गरे भने भोट हाल्नेको मन कस्तो हुँदो हो ? यो प्रश्नको जवाफ यतिबेला रोल्पाका सुनिल स्मृति गाउँपालिकाका जनतासँग छ । उत्तर के ? आक्रोश, विरोध ।
सुनिल स्मृति गाउँपालिकाका अध्यक्षसहित प्रशासकीय अधिकृत, अन्य वडाका अध्यक्ष एवम् पदाधिकारीहरु यतिबेला जनताका काम गर्न छोडेर मोजमस्तीका लागि छ लाख रुपैयाँ बजेट पास गर्दे भारत भ्रमणमा छन् । उनीहरु चैत २१ गतेदेखि नै कामकाज छोडेर विकास निर्माण तथा अन्य जनसरोकारका खर्चिनु पर्ने बजेट दुरुपयोग गर्दै भारत जाँदा स्थानीय जनता भने मर्कामा परेका छन् ।
जिल्लाका बिभिन्न टाढा टाढाको ग्रामीण भेगबाट आएका जनताको काम गर्ने जनप्रतिनिधिहरु कार्यालयमा नहुँदा दुःख मनाउ गर्दै रित्तोहात घर फर्किनु पर्ने बाध्यता छ । सेवाग्राहीहरु कार्यालयमा पुग्दा कार्यालय सहयोगीमात्र भएकाले गुनासो सुन्ने व्यक्ति पनि नहुँदा उनीहरु अक्रोशित हुँदै घर फर्किनु पर्ने बाध्यता भएको हो । गणतन्त्रमा यो भन्दा गैरजिम्बेवारीपना के होला ? एक सेवाग्रहीले आक्रोश व्यक्त गरे ।
जनयुद्धमा धेरैले जनताले ज्यान गुमाएको रोल्पा जिल्लामा शहीदका नाममा विद्यालय, गाउँपालिका, वडा आदि निर्माण भएता पनि जनताले अझै आफ्नो गाउँमा सिंहदरबार आएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । पाएका छन् छत पुरानै मुखिया प्रवृत्ति । प्रधानपञ्च र पञ्च मन्त्रीको चरित्र ।
रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिकाको नाम जनयुद्धका महान् शहीद तथा तत्कालीन ब्रिगेड कमाण्डर किम बहादुर थापा सुनिलको नामबाट नामाङ्कन गरिएको हो । तत्कालीन सरकारले सुनिललाई कायरतापूर्ण हत्या गरेको थियो ।
सुनिल आफैं मात्र मारिएनन्, उनका श्रीमती र छोरीले पनि तत्कालीन प्रहरीबाट धेरै हैरानी खेपे ।
महान सहिदका नाम राख्ने, लुट्ने, आर्थिक उपार्जन गर्ने कार्य गर्दा माओवादी पनि राजनीतिक व्यापारी भएको भन्दै जनतामा चर्चा हुने गरेको छ ।
रोल्पाका माओवादीका नेताहरु धेरैजसो राजनीतिक लाभ लिनेमा पर्छन । अधिकांश नाम चलेका नेता र तिनका परिवारहरु आर्थिक मामलामा वदनाम ठहरिएकाले त्यसको प्रभाव तलैसम्म परेको जिल्लाका कांग्रेसी नेताहरु भन्ने गर्छन । रोल्पामा कांग्रेसभन्दा माओवादी नेता बढी भ्रष्ट भएको जनताले पनि भन्ने गरेका छन् ।
विप्लव समूहका मकवानपुर जिल्ला इञ्चार्ज वीरबहादुर पक्राउ
सभामुखको लागि नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य अग्नि सापकोटाको मात्रै एकल उमेदवारी परेको...
क्वारेन्टाइनमा मृत्यु भएकाको रिपोर्ट कोरोना नेगेटिभ
गाउँपालिका–५ देउरालीस्थित सामुदायिक वनको भवनमा स्थापना गरिएको क्वारेन्टाइनमा राखिएका...
मुस्लिम आयोगमा अन्सारी ः नीतिमा खोट कि प्रवृत्तिको दोष...
विवादित पात्र समिम मियाँ अन्सारीलाई मुस्लिम आयोगका लागि राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेपछि...